Breaking News: Madaxweyne Obama oo la diley 2 xabadood ayaa lagu dhuftey(Daawo) – SBC
Breaking News: Madaxweyne Obama oo la diley 2 xabadood ayaa lagu dhuftey(Daawo)
Telefishinka caanka ah ee Fox News ee laga leeyahay wadanka Mareykanka ayaa shaaciyey in la diley madaxweynaha wadanka Mareykanka Barack Obama, isla markaana laba xabadood oo lagu dhuftey uu ku dhinte.
Warkan waxaa lagu baahiyey qaybte Twitter-ka ee Tv-ga Fox News gaar ahaan qaybta wararka arimaha diblumaasiyada looga faaloodo.
Maamulka Telefishinka Fox News ayaa sheegay in warkan lagu daabacay twitter-keeda ka dib markii la jabsadey furaha sirta ee barta Twitter-ka oo la afduubay.
Warkan markii la baahiyey ayaa jahwareer ba’ani ka dhacay wadanka Mareykanka, iyadoo dadweynaha Mareykanka & kuwa aduunkuba ay ku yaaceen qalabka warbaahinta gaar ahaan baraha Internet-ka & waliba Telefishinada si warkaasi ay u xaqiiqdsadaan.
Kooxda burcada Internet-ka ee qabsadey Twitter-ka Fox News ayaa ku qorey bartaasi Internet hadaladan “President Barack Obama assassinated, 2 gunshot wounds have proved too much. It’s a sad 4th for #america.” Arintaasi oo jahwareer galisay dadka Maraykanka.
Maamulka Fox News ayaa si deg deg ah hadalkaasi u beeniyey waxaana ay sheegeen in ay la xiriirreen laamaha amaanka ee wadanka Mareykanka & waliba maamulka shirkadaq Twitter-ka, iyagoo ka codsadey in arintan lagu sameeyo baaritaan adag a ka mid ahaa qoraaladii lagu baahiyay bartan.
“Waxaynu ka codsanaynaa Twitter inay naga siiyaan baaritaan cad, sida arintani ku dhaccdey, isla markaana loo qaadi lahaa talaabooyin looga hortagayo inaanay dib u soo laaban xaaladan oo kale, oo aanay ugu helin kooxdaasi awood inay ku galaan khaanadaha Fox News”, sidaasi waxaa yiri Jeff Misenti oo ah Madaxweyne kuxigeenka ahna Maamulaha Guud ee qaybta Digitalka Fox News.
Warbixin lagu daabacay bogga Intermet-ka ee Tv-ga Fox News waxaa laga bixiyey raaligalin warkan iyadoo lagu sheegay in ay Fox News ka xuntahay qalqalka & qandhada uu keenay warkan beenta ah ee lagu tweet gareeyey twitter-ka Fox News.
Halkan ka daawo war arintan ku saabsan